Kufanana uye Ingwe: Iyo Inofanirwa Kuve Newe kune Bhizinesi Mac Mushandisi | Martech Zone
Kufananidza neNgwe: Iyo Inofanirwa kuve Neayo kune Bhizinesi Mac Mushandisi
Mugovera, December 15, 2007 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Iine akawanda mabhizinesi ekunyorera ari kumhanya kubva kuMicrosoft, Mac ichiri marwadzo muchigamba chekumhanyisa munzvimbo yebhizinesi. Iyo nyowani yekushandisa Sisitimu yekuvandudza kubva kuApple inopa zororo neBootCamp, chishandiso chinokutendera iwe kuti uite mbiri-bhutsu yeIntel-based Mac mune chero OSX kana muWindows.
Dual booting, yechikamu chikuru, iri kuita sekumhanyisa makomputa maviri akasiyana kubva kune imwecheteyo Hardware, zvakadaro. Bootcamp yakanaka, asi kushanduka neshure harisi basa riri nyore. Kufananidza kwakagadzirisa dambudziko, kunyangwe uye kwakabatanidza nyika mbiri kuita nyika isingaratidzike kunge yakanaka! Ndanga ndichimhanya Kufananidza (nekuda kweshamwari, Bill) kubvira pamavambo ayo ekutanga.
Pakabatanidzwa kubatana, ndipo zvinhu zvakapenga pazvakatanga kuitika… kuve nechiteshi chengarava, bhawa rebasa nebhawa remaapuro zvese muhwindo rimwe chete zvinongoita kunge zvese zvisizvo! Zvakatonyanya? Kudhonza uye kudonha kubva kuWindows kunyorera kuenda kuMac kunyorera uye zvinopesana. Wow! Iyo Mac vs. PC nharo inozororwa handiti?
Hapasisina graphic muimbi, weWebhu dhizaini, kana wekunyorera mhando yekuvimbisa yehunyanzvi inoda zvidimbu zvidimbu zvehardware kuti iite chimwe chinhu chakareruka sekuyedza kweCross-browser kutevedzera. Ivo vese vanogona kumhanya zvisina musono kubva kune imwechete Mac - mune yangu MacBookPro.
Pakabuda Leopard, zvairatidza kuti mufaro wangu wainge wapera! Ndakaodza XP uye ndisingakwanise kuita kuti mafomu angu ashande sezvavaimboita. Ini ndakaburitswa, ndichitotora iwo mukana kunyora vamwe vevaya vari paParallels pachangu. Vakanga vakanaka vakomana uye vakandivimbisa kuti rubatsiro rwuri munzira!
Vhiki rino rakauya! Idzo dzazvino kukwidziridzwa kweZvakafanana dzakawedzera zvimwe zvimwe zvinhu pamwe nekuzara kweLeopard. Kana iwe uchitsvaga kunyorera kukuru kune wako Mac anofarira - izvi zvingave zvirizvo.
Kana iwe uri PC munhu uye uchingotya pachena nevanhu vakatonhorera veMac - uyu ndiwo mukana wako kuti ugare uine apuro rinopenya palaptop yako asi mhanyisa ako akanaka 'ol maapplication muWindows.
Tags: demographicsdhizaini mhindurokutsvakurudza misikaonline ongororochigadzirwa mhindurosocial media lifecyleSurveyMonkeykuongororwa kwekutsvaga kwemusikaubervuwebhu dhizaini maturusi
Anodiwa Anotambudza Mutengi
Flash: Chando Flakes
Zvita 15, 2007 na7: 34 PM
Ini handisati ndashanda ushingi hwakakwana kuti ndiwane yangu yekutanga Mac. Mwanasikana wangu wedanho anopika naiye uye amai vake, mumwe wangu akakosha, anogara achimubira Mac nekuti zvinofungidzirwa kuti zviri nyore kushandisa. Ndakakura… (kubva padambudziko repakati nepakati kuenda pamusoro pechikomo)… paWindows uye ndiri kuzeza kuchinja. Mumwe munhu angandipa Push munzira kwayo. Nei ndichifanira kutenga Mac. Ndiri kuda laptop nyowani.
Zvita 15, 2007 na7: 42 PM
Mac ndiyo nzira yekuenda, kunyanya ikozvino neZvakafanana. Kugadzirira kuisa Leopard pane mac laptop yemukadzi wangu. Pabasa rangu rekupedzisira ndanga ndichisundira mac laptop kuti inyatso kuyedza muchinjikwa browser pane 1 muchina pane kuda bvunzo yebvunzo.
Ndave neMac desktop yangu kwemakore uye handina kana nyaya nazvo senge ndinowanzo shandisa PC nemawindows.
Zvita 15, 2007 na7: 53 PM
Ini ndanga ndichifunga nezve kuwana izvi kune yangu yebasa mac, saka ndinogona kuyedza mawebhusaiti paWindows mabhurawuza… ndiri kushamisika kuti yakawanda sei sosi hogi iri?
Zvita 15, 2007 na8: 18 PM
Hazvina kunyanya kuipa, Mike. Kune yega OS chiitiko iwe chaunoseta, iwe unogona kuseta huwandu hwendangariro hwakabatana. Ndine 2Gb ye RAM uye ndine Windows XP inomhanya neinosvika 1Gb.
Izvo hazvitore yakawanda processor simba kumhanyisa chero OS - asi iwo maapplication aunomhanyisa mairi anozove nguruve dai dzaive hogi kare.
Zvita 15, 2007 na11: 36 PM
Ini ndinoshandisa VMWare Fusion, iyo ini yandinotenda isarudzo iri nani, sezvo iri yakaenzana. Chii chauri kuzoita neako Parrallels Windows semuenzaniso kana iwe uchida kuenda kune linux mune ramangwana? Kwete dambudziko neFusion…
Haisi chokwadi Linux iri mune rangu ramangwana padyo kubva kudesktop bhizinesi mushandisi maonero. Nezvakafanana ndinogona kumhanyisa ese mabhizinesi maapplication ayo ini andinoda. Ini ndinogona zvakare kumhanya Linux muParlellels (ini ndaive neUbuntu kumusoro asi ndakanyanyisa kukanganisa kuisa kwangu!).
Ndiri fan of virtualization uye VMWare. Ndiri kutamisa nzvimbo yedu yekugadzira ku Bluelock, kambani inoziva kugadziriswa kwemaapplication akabatwa neVMWare.
Ndafara kukuona pano, Dale! Ndakaona iyo ExactTarget IPO mapepa akaendeswa kune SEC. Zvakanaka zvinhu!
A post nezve virtualization uye iyo mac, uye iwe unongotaura chete yeumwe wevatambi vakuru? Rwuri kupi rudo rweVMWARE (rwandinofunga rwuri pamusoro… zvinoita sekunge "rakakwenenzverwa").
Ndiri kutya ndiri newb kana zvasvika paVMWare uye handina iyo kumusoro. Ini ndinofunga imhaka yekuti zvese zvandaida zviri kushanda zvakanyanya nePanoenderana. Sezvo ini ini ndakanyora Dale pamusoro, VMWare ichave iri chikamu chakakura chekuburitsa kwedu kugadzirwa munguva pfupi, zvakadaro. Tichakwanisa kuteedzera nharaunda nekuunza akasiyana 'manakiro' echishandiso chedu gore rinouya.
Zvita 17, 2007 na2: 16 PM
Ini ndangosimudzira Kufananidza kune yazvino vhezheni, uye izvozvi Vista (Bhizinesi) iri kuda kuti ndiite zvekare, uye kumisikidza pamhepo hakushande. Izvi zvinoitikawo kana iwe uchida kumhanyisa VMware kana Kufanana pamwe chete ne bootcamp.
Zvita 17, 2007 na5: 39 PM
Zvichava zvinonakidza kuona kuti Microsoft ichaita sei nekugadzirisa uye maitiro avo ekuita - chimwe chinhu chandisina kumbofunga nezvacho! Zvichida iyi ndeimwe yemabhenefiti ekuenda nepakeji nyowani yeMicrosoft, Hyper-V!
Zvinotambudza zvakanyanya kuti usakwanise kushandisa ese ari maviri bootcamp fomu yeWindows padivi peiyo VMWare fomu nekuda kwemitemo yekumisikidza. (Inoona iyo "shanduko yehardware" uye inoita kuti usabatise paunoshandukira kune imwe fomu).
Ini handisi Windows inovenga neimwe nzira, asi izvi zviri pachena kuti zvinogumbura pandakatenga kopi yeVista Bhizinesi.